China New multi mgbidi n'ọdụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa foldable eriri chaja PD30W rụpụta na Factory | Eletriki Electric
New multi mgbidi n'ọdụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa ụgwọ foldable eriri chaja PD30W
1. Obere ìhè kọmpat udi na n'akpa uwe-enyi na enyi size
*Iphone Wall chaja 30W Nkọwa nkọwa
USB chaja mgbidi chaja dị mma maka ndị ọrụ chọrọ chaja kọmpat nke dị fechaa ma dị ike. Mmepụta ruo 30 W, PD chaja mgbidi gị niile ngwaọrụ kachasị amasị gị gụnyere ekwentị gị, Nintendo Switch, na MacBook (oge nkwụ ụgwọ dabere na ụdịdị ngwaọrụ).
Ihe odide mpịakọta mgbidi ahụ na-emepụta ụdị ihe eji eme njem, ebe njikwa njikwa eriri ya na-eme ka eriri gị dị mma. Ewubere na nchekwa n'uche, njikwa njikwa ike na-enye oke nchekwa, oke ọkụ, oke ọkụ, obere elekere na nchedo anya, ma na-agbaso ụkpụrụ arụmọrụ VI nke US Department of Energy.
PD chaja ngwa ngwa na nnukwu ndakọrịta & mgbanwe, ngwọta abụọ na-akwụ ụgwọ nke nwere ike ịkwado ngwaọrụ USB A / C niile dị ka ekwentị na laptọọpụ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ n'otu oge. Ihe nkwụnye mgbidi USB na nhazi nkwụnye mgbanwe na-enye gị ohere izere igbochi mkpọchi ndị ọzọ ma weghachite ọdụ ụgbọ mmiri USB A / C maka ntinye dị mma nke eriri ejikọrọ - ọkachasị bara uru mgbe ị na-eji eriri ike ma ọ bụ onye na-eche nche na ọtụtụ ntanetị. Nakwa na smart IC mgbawa - IC mgbawa dị elu na-akpaghị aka na-achọpụta ma na-anapụta ike kachasị mma maka ikike ejikọrọ na ngwaọrụ ejikọrọ. Ngwaọrụ gị na-akwụ ụgwọ dị ka ngwa ngwa o kwere mee mgbe ị na-echebe ndụ batrị gị. (At Kwekọrọ n'Ozizi na PD & QC odori).
Ebube na nke a na - ebugharị - a nwalere ọdụ ụgbọ mmiri ahụ iji gbochie ojiji 10,000 na chaja ka arụ ọrụ iji guzogide na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ maka opekempe nke awa 10,000, na-enye gị mma ị nwere ike ịdabere na ya. Pd chaja nkwụnye na ọgụgụ isi ike nkesa, maximising na-arụ ọrụ arụmọrụ n'ihi na ma otu ma ọ bụ otutu ngwaọrụ. Emere ya iji rụọ ọrụ na kọmputa ọhụụ na ngwaọrụ dị nro, na-enye ohere maka nghazi nkwụghachi nkwụghachi na ụgwọ ngwa ngwa.
*USB Wall chaja 30W oke
Ultra Fast Charging Multi USB chaja
Ejiri ọdụ ụgbọ mmiri USBC nyefee ya, ma jiri 30W nke ike mmepụta site na QC3.0 teknụzụ, ihe nkwụnye a nwere ike inye iPhones ọhụrụ na mbadamba ngwa ngwa ụgwọ.
Ndakọrịta & Flexibility Pd USB C chaja
Abụọ na-otu Nchaji ngwọta na bụ ike nke na-akwado niile USBC na USBA kwadoro ngwaọrụ dị ka iPhone, Samsung na ndị ọzọ na USBC laptọọpụ na-arụ ọrụ ma onwe ha ma ọ bụ n'out oge.
Universal Ndakọrịta USB C Pd chaja
Site na USB A na USB C ọdụ ụgbọ mmiri, ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ngwaọrụ eletrọniki dị iche iche dịka iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, wdg.
Obere obere eriri C chaja
Ewe otu ohere dị ka Airpods na ị nwere ike mfe dabara ọ bụla n'akpa uwe ọ bụla, na ị nwere ike were ya na-gị-laa.
Nke gara aga: Ogo eluigwe na ala usb ngwa ngwa Nchaji mgbidi smart USB chaja PD30W
Osote: Ihe nkwụnye nkwụnye ngwa ngwa ngwa chaja USB chaja PD 18W